Toast famoronana 16 ary ny tsirairay dia asa fandrahoan-tsakafo kely | Famoronana an-tserasera
Heveriko fa mbola tsy teto mihitsy no hatao toast, avelao ihany ny famoronana indrindra hitan'ny masontsika. Io no hevitra lehibe nananan'ny mpanakanto Japoney Manami Sasaki ary nipoitra avy amin'ny fihazonana niainany.
Inona no tsara kokoa noho ny haka ireo silaka ireo avadiho izy ireo ho tonga zavatra mamorona fihinana tsara indrindra izay hitantsika tato ho ato; Ankoatra ireo sary ao anaty sombin-kafe izay efa mahazatra amin'ny fivarotana kafe maro. Andao jerena ny asan'i Sasaki.
Toast 16 no noforonin'i Sasaki ary ny marina dia asa, ankoatry ny matsiro, manana talenta lehibe amin'ny ambaratonga rehetra. Ary tsy toa ianao no nanamboatra azy ireo hahasarika ny masony - misakafo tsara fotsiny izy ireo.
Sasami manana azy mpanaraka maherin'ny 19.000 ao amin'ny Instagram ary izy ireo dia manaraka ny tsirairay amin'ireo toast 16 noforoniny tamin'ny andron'i COVID-19; tsy manadino ireo zavatra tsara ireo isika toy ny fototra.
Azonao atao ny manaraka ny kaontiny ao amin'ny Instagram ary toy izany koa fantaro ireo fahafinaretana amin'ny culinary ireo izay tsirairay amin'ireo volavola notanterahina. Ny voalohany, izay fonosin'ny famoahana, dia manana akora hafa, ankoatry ny silaka, ny voaroy ary ny tsiranoka sôkôla.
Ny iray hafa antsoina hoe zaridaina Japoney ary ao amin'ny izany vato izany na vato dia voanjo, na "Hanafuda", ahafahanao manavaka ny vorona amin'ireo algoma izay mamorona ampahany amin'ilay toerana noforonin'ity mpamorona Japoney ity.
Sei Sh? Nagon dia iray amin'ireo tapa-kevitra tianao indrindra miaraka amin'ireo litera ireo amin'ny teny Japoney ary indray ny ahidrano. Mpanakanto iray izay namoaka ny lafiny mamorona azy indrindra amin'izao andron'ny coronavirus izao miaraka amina toast 16 tena izy avy. Avelanay ny hafa hahafantaranao azy ireo ao amin'ny kaontinao Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny endrika famoronana toast famoronana indrindra hita